IiNkcukacha zeKhadi leCash ezikwiNgcaciso-nkcukacha-Funda ukuRhweba
tag: Ikhadi leMali eliPhambili
Uphengululo lweKhadi leMali eliPhambili: Uwujonga njani uMda weAdvCash
I-Advanced Cash, nesifinyeziweyo njenge-AdvCash, ngumbutho wentlawulo obanzi owabakho ngo-2014. IKomishoni yeeNkonzo zezeMali yaMazwe ngamazwe yaseBelize ilamkele eli qonga lokuhlawula. Ngapha koko, le nkqubo ikwadityaniswa neWave Crest Holdings Limited, eyaziwayo kuluntu lwekhadi leBitit. Eli qonga libonelela ngenkonzo ebalulekileyo kuye wonke umntu onxulumene nengeniso ebonakalayo. Ikuvumela ukuba wenze i-wallet e-multicurrency simahla, nangaphezulu, kweli khadi, ungangena okanye urhoxise iyantlukwano ye-e-currencies kunye nokudlulisa ngokukhawuleza kunye nokutshintshiselana kwemali kwihlabathi liphela. Eli nqaku liza kugxila kwakhona jonga umda we-advcash. Ngapha koko, esinye isibonelelo umsebenzisi anokufumana kuso kukukhutshwa kweplastiki okanye amakhadi abonakalayo kwiwebhusayithi yawo enegunya. Eli nqaku liza kukunceda kuyo yonke imiba yokwandisa ulwazi lwakho ngokubhekisele kumakhadi eMali aPhambili.
Ukuthobela i-AdvCash kubalulekile. Kungenxa yendima ebalulekileyo ayidlalayo ebomini babantu abanxulumene nemali yedijithali. Abatyalomali abaninzi batsaleleka kuyo njengoko besebenzisa imali ye-elektroniki kwaye bafuna ukuyisebenzisa kwiinkqubo ezinxulumene nokudluliselwa kwemali. Abatyali mali abaliqela basebenzisa le ndlela kwiiprojekthi ezinxulumene notyalo-mali.
Ukusuka koku, sinokuzuza kwizipaji zemali ezininzi. Ingeniso kwi-USD, i-EUR, i-GBP, kunye neRUB inokugcinwa kwaye idluliselwe kuyo. Ukuthumela imali kumazwe angaphezu kwama-200 kwihlabathi lonke kulula ukwenza oku. Ukuguqulwa kwemali kwi-form kwenye ifomu kunokwenzeka apha ngentlawulo yekhomishini engekho mgangathweni. Kuyo yonke imali yokutshintshiselana ngemali isezantsi kakhulu ukuba kungabikho namnye.
I-AdvCash ivula ikhadi layo ukwenza ukuba kube lula ngakumbi kubasebenzisi. Eli khadi le-Crypto liza kuphehlelela kungekudala kwaye lixhase iimali ezininzi. Nangona kunjalo, unoku-odola ikhadi lakho ngokundwendwela iwebhusayithi yabo. Ukuvelisa ugqithiso oluguquguqukayo lwenkunzi, unokugcwalisa le fomu ukuze ufumane eyakho. Ikhadi labo lemali linokubonelela ngezixhobo ezininzi kwihlabathi liphela ngokwenza umsebenzi wakho ube lula.
Zintathu iintlobo zamakhadi abazinikezela kubathengi babo.
● ADV iYurophu
● I-ADV kwihlabathi liphela
● Ihlabathi le-ADV Crypto
Ikhadi ngalinye linezibonelelo ezithile kunye nokunyaniseka. Ikhadi lehlabathi leCrypto lisebenza iminyaka emine. Kwelinye icala, abanye ababini basebenza iminyaka emithathu. Onke amakhadi anexabiso elahlukileyo, kwaye anikezela ngenkonzo yasimahla yekhuriya kwidilesi yakho. Jonga iwebhusayithi yabo ngolwazi oluneenkcukacha. Unokufumana ikhadi lakho ngosuku olunye kunye neendleko ezahlukileyo kuhlobo olukhethayo.
Iidiphozithi ze-AdvCash kunye nokuRhoxiswa:
Gcwalisa iakhawunti yakho yeAdvCash ngeMali egqibeleleyo kunye neBitcoins ngokunciphisa imali encinci. Ukuthengiselana nge-euro kunye needola, ukusebenzisa ikhadi le-AdvCash kuluncedo. Ngeenjongo ezahlukeneyo, ukusebenzisa i-e-currency kulula ukuyisebenzisa kweli khadi. Ukongeza, ukugcwalisa iakhawunti yakho, abaqhubi beefowuni eziphathwayo bayafikeleleka ..
Ukuthathela ingqalelo ukubaluleka okukhulayo kwemali ye-elektroniki, i-Advanced Cash iphuhlise inkqubo ebonelela ngazo zonke iimfuno zenkqubo yemali yedijithali. Ikamva labo liqaqambile njengoko abathengi babo besanda ngenxa yamathuba abo. Inqanaba eliphezulu lokhuseleko lwabathengi, akukho ukuvuza kwedatha, nokunye okuninzi. Jonga umda weAdvCash, njengoko ilungele wonke umtyali mali. Ngapha koko, kuya kufuneka ugcine iakhawunti yakho ngasese ngeenjongo zokhuseleko kwaye uphephe ukwabelana ngeepassword kunye nezinye iinkcukacha namaqela angaziwayo.
tags Ikhadi leMali eliPhambili, I-AdvCash, Ikhadi le-Crypto